Culture - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
13 mey 1972 - 13 mey 2017
André Rakotondranaivo sy ny fanagasiana
45 taona taty aorian'ny hetsika, mbola mitohy ny adihevitra momba ny fanagasiana. Mihodinkodina tsy mahita lalan-kivoahana ny Malagasy. Namosaka ny heviny manokana tao amin'ny tranonkala Poetawebs (Oktobra 2015) i André Rakotondranaivo, mpampianatra sady poeta, tamin'ny alalan'ireo fanontaniana napetrak’i Toetra Ràja.
Tsy niasa aho satria nanaja an'io fety io
Nanangona R.V il y a 4 années
Ny voalohan'ny volana mey teo no nankalazana ny fetin'ny asa, andro tsy fiasana raha ny tena marina. Miverimberina isan-taona.
Boky sy zon'ny mpamorona
Mendrika hajain'ny fiaraha-monina ny vidin'ny dinitra
Nanangona i RV il y a 4 années
Nankalazaina tamin'ny 23 avrily teo ny andro maneran-tanin'ny boky sy ny zon'ny mpamorona. Voakasik'izany ny Poety amin'ny maha mpamorona asa kanto sy asan'ny saina azy.
Ny poety sy ny tany
Tano ny HAZO; tano ny AZO, arovy ny TANY!
Ny tany? Velona eo amboniny, maty ao ambaniny. Ary raha handeha hifindra monina ny Malagasy iray dia tsofin-drano : "Tsy ho tampohin-tany". Santionany amin'ny fifamatoran'ny olombelona sy ny tany izany. Tsy misaraka amin'ny tany ny olombelona. Manana ny fijeriny koa ny poety.
Nankalaza ny alahadin'ny Paka aho satria...
Nanangona Chico il y a 4 années
Ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny Paka isika izao. Maro ny zavatra azo resahina momba izany fa andeha ny toeran’ny finoana ao amin’ny tontolon’ny fihetseham-po faratampony no hifantohantsika. Poety iray no mitafatafa amin’ny www.lakroa.mg.
Nanangona i JRR il y a 5 années